बॉसखोला चित्रेथुममा घरगोठमा आगलागी हुँदा एक महिला घाइते, ३ लाखको क्षति ! – ebaglung.com
बॉसखोला चित्रेथुममा घरगोठमा आगलागी हुँदा एक महिला घाइते, ३ लाखको क्षति !
२०७५ भाद्र २६, मंगलवार १८:४८	Top News, थप समाचार
थम्मन थापा सन्देश, गलकोट भदौ २६ गएराती गलकोट नगरपालिका ९ बॉसखोला चित्रेथुममा एक घरगोठमा आगलागी भएको छ । स्थानिय बिन बहादुर विश्वकर्माको घरगोठमा आगोलागी हुॅदा घरमा भएका लत्ताकपडा, अन्नपात र अन्य सामाग्री जल्दा झण्डै ३ लाख बराबरको क्षति भएको वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष तेज बहादुर थापाले जानकारी दिए । राती करिब ९ बजेको समयमा खाना पकाएर रहेका केहि आगोको झिल्कोले उक्त आगोलागी भएको पीडित विकले जानकारी दिए । आगो स्थानियको सहयोगमा राती १० बजे नियन्त्रणमा आएको थियो । आगोलागी हुॅदा विककी बुहारी दुर्गा विश्वकर्मा घाईते भएकी छन् । घाईते विकको राती नै स्थानियको सहयोगमा ईमर्जेन्सी पोलिक्लिनिक प्रालि हटियामा उपचार भईरहेको छ । घाईतेको कम्मर मुनिको भाग जलेको वडा अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए।
आज बिहान घाईते विकको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गल्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरे अस्पताल पुगी स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नगर प्रमुख गैरेले नगरको तर्फबाट तत्काल प्राथमिक उपचार स्वरुप नगद रु १५ हजार र १ थान त्रिपाल उपलब्ध गराएका थिए छ । आगोलागीबाट गोठमा रहेको भैंसीको शरिरको पछिल्लो भाग समेत जलेको र आजै पशु सेवा केन्द्र कॉडेबासको सहयोगमा उपचार गरिएको पारिवारिक श्रोतले
। घटनाको वडा अध्यक्ष तेज बहादुर थापा र ईलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरि मुचुल्का समेत तयार पारेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । आगो नियन्त्रणको क्रममा स्थानिय रत्न बहादुर विक समेत घाईते भएका छन्। घाईते विक सामान्य उपचार पछि घर फर्किएका छन । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको विक परिवारले सहयोग गरिदिन सबैमा अपिल समेत गरेका छन ।
बरिष्ठ साहित्यकार शशी पन्थी सम्मानित !